भोको बसेर कोरोनाको उपचार – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७७ मंसिर १० गते १४:५४ मा प्रकाशित
चितवन । यहाँ सञ्चालित आइसोलेशनमा रहेका ३६० जना कोरोना संक्रमितको उपवास विधिबाट उपचार गरिएको छ । प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको विधिबाट उनीहरु निको भएर घर फर्किएका छन् ।
योगी नरहरिनाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय, वागीश्वरीमा सञ्चालित आइसोलेशनमा रहेकालाई डा. हेमराज कोइराला नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले उपचार गरिरहेको छ । कोइरालाका अनुसार उपवास गर्दा व्यक्तिले निश्चित समयका लागि खाना त्याग गर्ने वा क्यालोरी ग्रहणमा रोक लगाउने गर्छ ।
आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा पनि उपवास गरेर अनेक असाध्य रोग जित्न एवं रोकथाम गर्न सकिने तथ्य पत्ता लगाइसकेको उहाँको भनाइ छ । सन् २०१६ मा जापानका वैज्ञानिक यासुनुरी यसुमीलाई उपवास फिजियोलोजीमा गरेको महत्वपूर्ण खोज एवं अनुसन्धानका कारण नोबेल पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ मा सरल तरिकाले गर्न सकिने भनेको आवधिक उपवास हो । सङ्क्रमितले २४ घण्टाको समयलाई आठ घण्टा खाना खाने समय र १६ घण्टा भोकै बस्ने समय भनेर छुट्याएको हुन्छ ।
यसरी छुट्याउँदा बिहान ९ः०० देखि साँझ ५ः०० बजेसम्मको अविधिलाई खाना खाने समय र साँझ ५ः०० देखि बिहान ९ः०० बजेसम्मको अवधिलाई भोकै बस्ने समय भनेर छुट्याउँदा राम्रो हुने डा. कोइरालाले बताए । आइसोलेशनमा त्यहीअनुरुप तालिका बनाएर खाना खाने र उपवास बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनले भने, ‘यसमा ८÷१६ को समयलाई ६–१८ र विस्तारै बढाएर ४–२० पनि गर्न सकिन्छ । यसरी खाना खाने र भोकै बस्ने अवधि छुट्याएर उपवास बस्दा खाना खाने अवधिमा भने प्रशस्त मात्रामा पौष्टिक तत्व लिनुपर्ने हुन्छ ।’ खानामा विशेषतः उच्च रेशा र चोकर भएको, झोलिलो, प्रशस्त भिटामिन एवं एण्टिअक्सिडेण्टयुक्त खाना खानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनका अनुसार हाम्रो शरीरमा विद्यमान कोषमा दैनिक हजारौँ जैविक रासायनिक क्रिया भइरहेका हुन्छन् । ती क्रियाको उपजस्वरूप कोषमा अनेकौँ प्रकारका काम नलाग्ने, विषाक्त एवं उत्परिवर्तित रसायनको उत्पादन पनि भइरहेको हुन्छ । ती रसायनका साथै काम नलाग्ने कोषीय अङ्ग वा बाहिरबाट आएका रोगकारक जीवाणु, विषाणु, ढुसी वा परजीवीले पनि कोषलाई क्षति पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
शरीरको कोषमा उपवासका कारण खाना नभएपछि ऊर्जास्तर घट्दै जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा शरीरमा रहेका काम नलाग्ने तर पचाउन सकिने भाइरस, प्रोटिन जस्ता वस्तुलाई पचाएर शरीरले ऊर्जा लिने उनको भनाइ छ । यसरी नै उपवासका माध्यमबाट वागेश्वरीको आइसोलेशनमा रहेका संक्रमितको सफल उपचार गरिएको डा. कोइरालाले बताए ।
त्यहाँ लक्षण देखिएका बिरामीको उपचार गरिँदै आएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले भदौ १४ गतेखि सञ्चालन गरेको उक्त आइसोलेशनमा हाल १३ संक्रमित छन् । महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार आइसोलेशन सञ्चालनमा लाग्ने सबै खर्च महानगरले व्यहोर्दै आएको छ । हाल उपवास विधिबाट देशकै नमूना आइसोलेशनका रुपमा यहाँ सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको उनको भनाइ छ । दाहालका अनुसार महानगरपालिकाले समिति निर्माण गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।